Sintering iZirconia-Iindaba-VSmile Co., ltd
Ixesha: 2021-07-09 I ngxelo:35
Imiba emininzi yokubuyiselwa kwe-zirconia inxulumene nemijikelezo yokuntywila kunye nobunzima. here ngaba eziliqela izinto malunga nesithando somlilo kunye nokucoca i-zirconia ekufuneka uyazi ukuze ufumane ezona ziphumo zibalaseleyo kunye nezona zintle kakhulu zokubuyiselwa kwakho kokugqibela.
1. Zeziphi izinto zokufudumeza ezikwiziko lakho lokuntywila?
Izinto zokufudumeza iziko lakho kusenokwenzeka ukuba yiMolybdenum Silicide (MoSi2) okanye iSilicon Carbide (SCi).
2. Izinto ezi-Heating MoSi2 zifuna uKhathalelo olulodwa
Ukuba iziko lakho lisebenzisa iMolybdenum Silicide, lenza i-quartz yodongwe kumphezulu ongaphandle wokubuyiselwa okunxibelelana nombala wombala oluhlaza. Ixesha elingaphezulu, indawo yokunyibilika yale quartz iba sezantsi kuneqondo lobushushu eliphezulu lomjikelo wokuntywila kwaye oku kudala ungcoliseko kwigumbi lomlilo. Ngenxa yoko, ezi zinto zingcolisayo zinokubangela ukuluhlaza okanye ubumnyama bokubuyiselwa. Ukuthintela oku kuya kufuneka uhlale usebenzisa i-crucible egqunyiweyo. Oku kuya kunciphisa ukubakho kongcoliseko lwegumbi ekubuyiseleni.
3. Ungcoliseko lweQuartz
Ungcoliseko lwe-quartz lunokuba nefuthe kwi-thermocouple ekuhambeni kwexesha, malunga neenyanga ezi-6 ukuya kwezi-12. I-thermocouple iya kuthumela ukufundwa kweqondo lobushushu elisezantsi kwipaneli yokulawula ekhokelela ekudubuleni amaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-100 ° ephezulu kunokuba kucwangcisiwe.
4. Bukela iXesha lonke
Ukusuka kubushushu begumbi ukuya kwi-900 ° C, akukho siphumo sincinci ekubuyiselweni. Ireyithi ye-ramp ukusuka kwi-900 ° ukuya kwi-temp ephezulu, ukusuka kwi-temp ephezulu yokubamba ixesha, ukungaguquguquki kwetempe ekubambeni, kunye nezinga lokuphola ubuye umalunga ne-900 ° konke kubalulekile.
5. Qiniseka ukuba iiKhalantshi zome
Ukungomisi ngokwaneleyo imibala eya kongezwa kumbala oluhlaza zirconia ezinemibala ngaphambi kokuntywila kuya kunciphisa i-MoSi2 yokufudumeza into kwaye yongeze ingxaki yongcoliseko kwiindawo zokucoca.
Iziphumo ezilungileyo, kufuneka usoloko ulandela imiyalelo yomenzi xa ujika i-zirconia.
Ngaba unazo naziphi na iingcebiso malunga nokususa i-zirconia okanye unayo nayiphi na imibuzo? Yabelana nabo ngezimvo-singathanda ukuva kuwe!
I-PREV: Amanqaku oMbane weZirconia Crown
OKULANDELAYO : IVsmile Acetal Resin
Vsmile HappyZir UT Iibhloko zeZirconia eziLungisiweyo
Vsmile HappyZir ST I-block yeZirconia engaphambi kokumiswa